Barnstable Co. mankalaza ny faha-25 taonan'ny Dredging - Ellicott Dredges
Ny fandaharan'asan'ny dredging Barnstable County, Massachusetts, dia nankalaza ny faha-25 taonany vao haingana. Ny distrika, izay manana sy mitantana dredge suction suction marika Ellicott® telo, dia nanala fitaovana efa ho 2.4 tapitrisa metatra toratelo nandritra ny tetikasa dredge mihoatra ny 300.
Nandritra ny ampahefatry ny taonjato, ny fandaharan'asa dia nitazona ny lalan-drano mankany sy avy ao amin'ny helodrano ho mora mivezivezy ho an'ny sambo fanjonoana, miaraka amin'ny 95% amin'ny akora voatarika manampy amin'ny famerenana ny tora-pasika manodidina ny saikinosy.
Tamin'ny taon-dasa no nahomby indrindra hatramin'izao, ary efa ho 150,000 metatra toratelo no nesorina tamin'ny tetikasa tao Barnstable, Yarmouth, Falmouth, Bourne, Provincetown, Truro, Dennis, Mashpee, Chatham, ary Harwich. Ted Keon, tanànan'ny talen'ny harena an-kibon'ny tany ao Chatham, dia nilaza fa miankina amin'ny lalan-drano azo antoka sy azo antoka ny vondrom-piarahamonina an-dranomasina.
“Ny sambo fanjonoan'i Chatham dia singa manan-danja amin'ny toekaren'ny tanàna sy ny fanjakana manontolo,” hoy i Ted Keon, talen'ny loharanon-karena amoron-tsiraka ao Chatham. "Ny fanohanana ny tetikasa dredging dia manana fiverenana ara-toekarena lehibe."
Dredge "SAND SHIFTER" ao amin'ny Nenitoa Lydia's Cove, Chatham. Ken Cirillo
Rehefa natomboka ny fandaharana 25 taona lasa izay, ny asa voalohany ho an'ny Codfish - ny dredge ho an'ny daholobe tany am-boalohany - dia tao Truro. Miverina saika isan-taona ny Codfish mba hisokatra hatrany ny fantsona. Ho fanampin'ny Codfish, izay ampiasaina ho booster ankehitriny, ny distrika dia manana ny Sand Shifter sy ny Codfish II, izay novidina tamin'ny taona 2019.
Ny fanadihadiana nataon'ny Diviziona Massachusetts momba ny jono an-dranomasina, ny Fishermen's Alliance, ary ny UMass Boston's Urban Harbors Institute, dia naneho fa ny dredging no zava-dehibe indrindra amin'ny seranan-tsambo rehetra ao amin'ny fanjakana.
"Ny asan'ny dredge ao amin'ny distrika dia tena ilaina toy ny fikojakojana ny lalana sy ny lalambentsika," hoy i Seth Rolbein, izay nitarika ny ezaka momba ny seranan-tsambo ho an'ny Alliance Fishermen. "Ny fahasalamana ara-toekarena ao Cape dia miankina amin'ny fananana lalana azo antoka mankany an-dranomasina."